Fampidirana ny fanekena ny tarehy amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana - OMG Solutions
Fampidirana ny fanekena ny tarehy amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana
Ny fanekena ny tarehy dia fampiharana rindrambaiko biometric izay afaka manavaka na manamarina olona iray amin'ny alàlan'ny fampitahana sy ny fanadihadihana lamina miorina amin'ny alalàn'ny tarehin'ilay olona. Ny fankatoavana tarehy dia matetika no natao ho an'ny fiarovana, nefa manampy koa amin'ny fitadiavana olona tsy hita. Raha ny marina, ny teknolojia manaiky tarehy dia nahazo fiheverana lehibe satria izy dia mety misy fangatahana apetraka mifandraika amin'ny fampiharana ny lalàna sy ny orinasa hafa.
Ny fakantsary fiarovana fiarovana amin'ny tarehy dia afaka mitadidy ny tarehin'ireo olona liana, tamba-jotra amin'ny andian-jiolahy, te-hanao heloka bevava ary olona ahiahiana ho nanao heloka bevava. Mampitandrina ireo tompona orinasa ny fitaovana rehefa tonga eo amin'ny taniny ny olona tsy mandray.
Ahoana ny fiasan'ny tarehy
Eo ampanahy momba ny fiainana manokana sy ny mahitsy, zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba fiasan'ny tarehy. Ny fanekena ny tarehy dia miankina amin'ny teknolojia maro hiasa: rafitra fakana sary (fakantsary na fanaraha-maso horonan-tsary), fahaizana voajanahary ary fianarana milina. Sarintanin'ny sarin-tava ny endrika endri-javatra avy amin'ny sary na horonan-tsary ary manova azy ireo ho angon-drakitra biometric dizitaly. Mampitaha io sonia nomerika io amin'ny tranokalan'ny endrika fantatra mba hahitana lalao.
Misy dingana efatra amin'ny fanekena ny tarehy:
Ny rafitra dia maka sary ny tavanao rehefa mandalo ianao. Ity dia mety ho sary horonantsary na sary.
Ny rindrambaiko fankasitrahana tarehy dia mamaky ny geometran'ny tarehinao. Toa ny zavatra toy ny elanelana eo amin'ny masonao, ny handrina amin'ny haavon'ny andry ary ny mari-pamantaran-tarehy mba hamolavola sonia nomerika amin'ny tavanao.
Ny sonia endrikao, endrika matematika an'ireo sy ny zény tsy manam-paharoa ho anao, dia ampitahaina amin'ny angon-drakitra tarehy fantatra.
Ny rafitra no mamaritra ny maha-ianao anao.
Aiza no fampiasana ny fanekena tarehy?
Ny seranam-piaramanidina dia iray amin'ny toerana be olona. Ny fitomboan ny isan ny olona koa mampitombo ny fitomboana ny tsy fandriampahalemana. Na dia manana fitaovana fanaraha-maso aza ny seranam-piaramanidina, ny fakantsary CCTV, ary ny rafitra fiarovana hafa, dia mbola misy ny fahalemena fiarovana. Miaraka amin'ny fampielezana ny haitao fankasitrahana tarehy dia azo hatsaraina ny fiarovana ny seranam-piaramanidina. Napetraka ao anaty fiara fitateram-bahoaka, fiara fitateram-bahoaka, fiara fitateram-bahoaka, yachts, ferryboats, ary fiaran-dalamby ireo fiara ampandinihana ireo mpandeha ary ampitahain'izy ireo amin'ny tranokalan'ny sary. Raha misy ny olona maniry, dia mailo ny mpamily sy ny manam-pahefana miahiahy.
Tamin'ny fanekena ny tarehy dia noforonina voalohany ho amin'ny antoka sy ny fahazoan-dàlana fidirana, hiasa amin'ny fepetra voafehy ary hanamafisana fa ny olona iray no ambaran'izy ireo. Ankehitriny, ny fakantsary no mandanjalanja ny valalabemandry, mampitaha ny tarehy rehetra mandalo amin'ny lisitry ny fiambenana.
Betsaka ny masoivoho mpampihatra lalàna no mampiasa ny fankatoavana ny tarehy ho amin'ny famakafakana ireo rakitsary horonantsary voatahiry, fitahirizana fotoana sy ezaka, sarotra kokoa izany amin'ny fampiasana ny tena izy, amin'ny tena tontolo. Ny matematika fanamarinana ny mpandalo tsirairay ao amin'ny habaka be olona amin'ny lisitra fiambenana kely dia manery ny fahazoana ny endrika ny fetrany. Ny fakantsary “Mini WIFI / GPS / 3G / 4G body-Worn - fakantsary fotsiny ihany (BWC058-4G)”Afaka miatrika.
Mifanohitra amin'ny fankatoavana ny tarehy dia efa nahita ny fananganana faobe ny razana. Ireo fitaovana horonan-tsarimihetsika mandeha amin'ny vatana ireo izao dia manararaotra ny fanamiana polisy manerana izao tontolo izao, manome ny fitantanana ny porofo, ny fiarovana ny manampahefana ary ny antoka ho an'ny daholobe. Bodycams dia mirakitra an-tsary ny fakana aina ho an'ny fihenam-batana. Ny hafa kosa mifandray amin'ny holavin'ny fitaovam-piadiana raha te-hampiditra horonantsary fandraisam-peo. Rehefa nivoatra ny fitaovana finday dia namboarina ho lasa mahery vaika kokoa ireo maodely vaovao amin'ny vatan'orinasa izay miorina amin'ny sehatra finday. Midika izany fa hifaninana ny teknolojia roa. Ny fanekena ny tarehy amin'ny bodycams dia dingana manaraka. Manam-pahefana manome hery amin'ireo lisitra famantaran-jaza, olona liana, tsy misy zaza, olon-dehibe marefo.
Ny fampiasana ny faneken'ny tarehy amin'ny bodycams dia manome fiarovana amin'ny fiampangana ny fitondra-pirazanana. Ny politika dia azo apetraka mba hisorohana ireo mpiandraikitra hitady ireo tsy nofinofisin'ny tarehy, na dia ajanony aza. Raha toa ny fiampangana azy hiatoana sy ny fitadiavana ireo heloka bevava ambany lenta any amin'ireo vondron'olona manokana, dia mandanjalanja ny fankasitrahana ny tarehy amin'ny vatan'ny vatana. Io karazana fiarovana io no hanampy haingana ny fananganan'anarana amin'ny ankapobeny.
Ny fanekena ny tarehy amin'ny vatana ihany koa dia hanome fanamarinana faharoa ho an'ny lalao avy amin'ny fiara mpanara-maso sy fakan-tsary CCTV. Taorian'ny lalao voalohany dia nanatona ilay olona ny manampahefana mandeha an-tongotra ary nanao fisavana fanamarinana faharoa avy amin'ny bodycam, nihazakazaka avy amin'ny lisitry ny fiambenana mitovy. Raha tsy misy ihany koa ny lalao dia mbola misy zavatra hafa raisina. Raha ny tenany, fiarovana ara-materialy tokoa izy ity raha ny antsoina hoe vokatry ny sandoka diso. Izy io koa dia manome olona hifanerasera amin'ny olona alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra farany momba ny fisamborana.
Ny taranaka voalohany amin'ny vatana izay miasa ankehitriny dia nifantoka tamin'ny firaketana horonantsary ho an'ny rafitra fitantanana porofo. Ankehitriny dia manala ny fifantohana mivantana i Livecam mba hipetrahana mivantana amin'ny streaming video, ny fankatoavana ny tarehy ary ny Edge-AI. Ity vatan-dehilahy IoT (Internet of things) manaraka ity dia hanatevin-daharana ny fitaovana IoT an'arivony tapitrisa izay apetraka amin'ny tambajotra 4G sy 5G mandritra ny taona maro ho avy. Namboarina ho tamba-jotra, hizara data, hampisaraka ny fizotran-jotra ka hatrany afovoany, ireo fitaovana ireo dia hivoatra amin'ny alàlan'ny firaketana horonantsary 'just in case' mankany amin'ny fitaovana fanaovana poliera tena ilaina.
Ary araka izany, raha ny resaka momba ny fanaovana pôlitika, ny taona ho avy dia ho voamarika ho toerana fihodinana ho an'ny tarehy. Ny fitsapana dia ho morphives. Hisy valiny ny famoahana entana. Ho resy ny tohan-kevitra. Ny ankamaroan'ny vahoaka, amin'ny farany, dia hifidy ny filaminan'ny tena manokana sy ny fiarovana noho ny fiainana manokana. Nahatsapa ny antso maro ho an'ny fameperana sy ny fanarahan-dalàna, fanadihadiana iray navoaka talohan'ny volana vitsivitsy dia nahita fa ny 18% ny Amerikanina dia mino fa ny fanekena ny tarehy dia tsy maintsy voafetra amin'ny fandoavana ny filaminam-bahoaka. Ary eo no hiverenan'ny vatana vatana ho azy. Raha afaka mampiofana ny manampahefana mpitandro ny filaminana isika hamantatra izay meloka fantatra, ny olona liana rehetra, ny olon-dehibe rehetra marefo na ny zaza tsy hita, amin'ny 99% na mihoatra ny haavon'ny fitomboan'izy ireo.
Ny fanenjehana ny tarehy
Mitombo ny filaminana: Iray amin'ireo tombo-tsoa lehibe indrindra amin'ny teknolojia ekena ny tarehy dia ny fampivoarana ny fiarovana sy ny filaminana. Avy amin'ny masoivohon'ny governemanta ka hatramin'ny fampiasana manokana, dia mitombo ny tinady amin'ny rafitra fiarovana sy fanaraha-maso. Mahafantatra sy mikaroka ireo olona tonga eo amin'ilay toerany ny fandaminana ary afaka mandanjalanja mora foana ireo mpitsidika izay tsy voaray. Mety hanampy be dia be izany rehefa mahita mpampihorohoro mety hitranga. Fanampin'izay, tsy misy fanalahidy, bokotra na tenimiafina izay azo nangalatra na very.
Haingana sy marina: Miaraka amin'ny fitakiana tsy mitsaha-mitombo ny hafainganam-pandeha sy ny fitomboan'ny cyberattacks, manana ny haitao haingana sy marina. Ny teknolojia fankatoavana tarehy dia manome fanamarinana izay mora, haingana ary marina. Na dia azo atao aza dia sarotra dia mamitaka ny teknolojia manaiky ny tarehy, izay mahasoa azy amin'ny fanampiana ny fisorohana hosoka.
Tsy mifandray: Ny fankatoavana endrika dia alefa noho ny fanodikodin-tànana noho ny dingana tsy mifandraika aminy. Tsy mila miahiahy momba ny mety hisian'ny faharatsiana mifandraika amin'ny haitao famantarana famantarana ny rantsantanana toa ny mikraos na marika ireo olona.
Ny vidin'ny fampiharana ny avo: Ny fanekena endrika dia mila fakan-tsary avo lenta sy rindrambaiko mandroso mba hahazoana antoka sy haingam-pandeha. Na eo aza izany dia nambaran'ny Allied Market Research fa ny fandrosoana ara-teknolojika dia mety hampihena ny vidin'ny rafi-pitsarana tarehy amin'ny ho avy.
Data Storage: Ny horonantsary sy sary avo lenta takiana amin'ny fankatoavana tarehy dia mitahiry tahiry betsaka. Mba hahomby ny rafitra fankatoavana ny tarehy dia ny 10 amin'ny 25% ihany no hanodin'izy ireo. Izany dia mitarika fikambanana hampiasa solosaina marobe mba handrosoana ny zava-drehetra sy hanaovana azy haingana.
Fiovana eo amin'ny endrika sy fantsom-pifandraisana: Ny fiovana lehibe rehetra amin'ny endrika ivelany, anisan'izany ny volo sy ny fiovan'ny lanjany, dia afaka manary ny teknolojia. Amin'ireny toe-javatra ireny dia takiana sary vaovao. Ny zoro fakantsary dia mety hiteraka olana ihany koa satria zoro maromaro ny ilana hamantarana endrika.
Amin'izao fotoana izao dia tsy misy lalàna mifampiresaka mivantana amin'ny famerenana sy ny fitantanana ny fakan-tsary mitaingotin'ny polisy. Ny lalàna dia miharihary lavitra noho ny haingam-pandeha haingana izay mampivoatra ny teknolojia fanaraha-maso, toy ny fakan-tsary mifono vatana. Ny tsy fisian'ny lalàna sahaza dia miteraka loza mety hanjary atahorana noho ny fampiasana ny teknolojia fanaraha-maso ny fiainana manokana.
Teknolojia mahery ny fanekena ny tarehy fa tsy maintsy nampiasaina amim-pahendrena. Amin'ny lafiny iray, tombony lehibe ho an'ireo orinasa sy mpampiasa farany izany, manampy azy ireo hanatsara ny filaminany ary hanara-maso ireo mpandika lalàna. Amin'ny lafiny iray, azo ampiasaina amin'ny tombotsoany manokana izany ary miteraka voka-dratsy lehibe. Mandritra ny taona X farafahakeliny dia # 5 hahalala ny endriny amin'ny zon'olombelona sy amin'ny fiainana manokana.
Ny fakantsary vita amin'ny vatana miaraka amin'ny fanekena ny tarehy dia ampiasaina tsara ary hampihenana ny mety ho vokadratsin'ny voka-dratsy ary mety hitranga amin'ny tsiambaratelo, ny lalàna mifanaraka dia tokony ho voasoratra izay miresaka mivantana momba ny fampiasana ireo fitaovana ireo. Misy ny mety ho fakan-tsary azo ampiasaina ho fitaovana ilaina mba hahatratrarana tsara andraikitra; na izany aza, dia azo atao izany raha toa ka omen'ny lalàna ny protocols mifanaraka amin'ny lalàna mety.
Anon., Nd Tatitra momba ny fiarovana an'izao tontolo izao. [Online]
Hita amin'ny: http://www.worldsecurity-index.com/shareDir/documents/15508405770.pdf
Hita amin'ny: http://www.bwvsg.com/resources/procedures-and-guidelines/
Hita amin'ny: https://becominghuman.ai/the-threats-and-benefits-of-facial-recognition-what-should-we-know-17008f69ae74
Doffman, Z., nd [An-tserasera]
Hita amin'ny: https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/01/10/body-worn-2-0-how-iot-facial-recognition-is-set-to-change-frontline-policing/#4e0a5cad1ff3
Hita amin'ny: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/08/19/facial-recognition-technology-here-are-the-important-pros-and-cons/#28c79e8e14d1
Ekipa, RM, 2019. RTI. [Online]
Hita amin'ny: https://www.1rti.com/pros-cons-of-facial-recognition-technology/
Wendt, R., 30 july 2019. SALAM-PIVAROTANA sy FIKAMBANANA. [Online]
Hita amin'ny: https://www.securitysales.com/news/facial-recognition-tech-scrutiny/
Fampidirana ny fanekena ny tarehy amin'ny fakan-tsary amin'ny vatana no farany niova: Desambra 3rd, 2019 by Admin